Gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ọchịchị - Uniproma-Mgbe kemistri na-arụ ọrụ
Kwadoro ma na-adigide
Ọrụ dịịrị ndị mmadụ, ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi
Onye ọ bụla bara uru
Ọrụ anyị na ndị ọrụ
Ọrụ echedoro / Mmụta ndụ ogologo oge / Ezinụlọ na Ọrụ / Ahụ ike ma dabara adaba na ezumike nka. Na Uniproma, anyi na etinye ndi mmadu ugwu puru iche. Ndị ọrụ anyị bụ ihe na - eme anyị ịbụ ụlọ ọrụ siri ike, anyị na-akwanyere ibe anyị ùgwù, ekele, na na ndidi. Onye ahia anyi di iches na-elekwasị anya na uto nke ụlọ ọrụ anyị na-eme ka o kwe omume na ndabere a.
Ọrụ anyị na gburugburu ebe obibi
Ngwaahịa na-echekwa ume / Ihe nchekwa gburugburu ebe obibi / ationgbọ njem na-aga nke ọma.
Maka anyị, chebetinye Ọnọdụ obibi ndụ dị ka o kwere mee dịka anyị nwere ike. N'ebe a, anyị chọrọ inye onyinye na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa anyị.
Uniproma nwere usoro nlekọta mmekọrịta nke etinyere iji hụ na ị na-agbaso iwu iwu mba na mba ụwa na iji mepụta mmezi nke ọrụ metụtara ọrụ arụmọrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-echekwa nghọta zuru oke nke ọrụ ya na ndị ọrụ. Mụbawanye na ndị na-ebubata ya na ndị mmekọ nke atọ ya na-elekọta mmadụ, site na usoro nhọrọ na nlekota nke na-atụle ọrụ mmekọrịta ha.